Spalletti oo sharaxaad ka bixiyay sababaha ka dambeeya guul daradii wayneyd ee ka soo gaartay kooxda Atalanta – Gool FM
Spalletti oo sharaxaad ka bixiyay sababaha ka dambeeya guul daradii wayneyd ee ka soo gaartay kooxda Atalanta
Dajiye November 12, 2018
(Inter) 12 Nof 2018. Tababaraha kooxda Inter Milano Luciano Spalletti ayaa sharaxaad ka bixiyay sababihii ka dambeeyay guuldaradii xanuunka badnayd 4-1 ahayd ee kasoo gaartay dhigooda Atalanta, kulankooda 12-aad ee horyaalka Talyaaniga.
Nerazzurri ayaa kulankan raadineesay guusheedii sideedaad xiriir ah ee horyaalka Serie A , laakiin sheekada ma aysan u dhicin sida ay dooneesay, waxayna guuldaro niyad jab ah kala kulmeen kooxda Atalanta.
Hadaba kulanka kadib macalinka reer Talyaani ee Luciano Spalletti ayaa wuxuu ka hadlay dareenkiisa kaga aadan guuldarada ay kala kulmeen kooxda Atalanta wuxuuna yiri:
“Nasiib darro, waxay u muuqataa inaan awoodi waynay y inaan diirada saarno muddo dheer ciyaarta, taas macnaheedu waxay tahay inaan u ogolaanay kooxda kale inay ka faa’ideystaan qaladaadkeena”.
“Markaan la kulano koox si fiican u qaabaysan oo si fiican loo abaabulay, waxay noqoneysaa mid aad u adag”.
“Kooxda Atalanta waxay joogtaysay qaab ciyaareed fiican tan iyo bilawga ciyaarta, wayna ka faa’ideysteen”.
Real Madrid oo guul raaxo leh ka gaartay Celta Vigo, iyo Santiago Solari oo halkiisa kasii waday guulahiisa xiriirka ah ee Los Blancos
Kaddib Guul daradii Xalay ka soo gaartay kulankii Manchester Derby, Jose Mourinho oo ku Mar-marsiyooday in....